ရခိုင့်အတွေးအခေါ်: မီးရဲရဲတောက်နေသော သားအိမ်
Ken Dedes ကန်ဒေဒီး သည် ဂျာဗားကျွန်း ဒန်ဒါရီပုံပြင် Pararaton ပရာရာတင် ထဲက မုံမုံဝါးဝါး ဇာတ်ရုပ် ဇာတ်ကောင် တစ်ဦးဖြစ်ပါသီဝ်။ သူမ သည် ထူးခြား ဆန်းပြား ပြီး အင်အားကြီးမားရေ တန်းခိုး အိထိပတ် တိကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါ။ ကန်ဒေဒီး ကား နယ်စားတစ်ဦး အိ မယားဖြစ်လို့ တစ်ရက်နိ မြင်းရထားစီးလို့ ခရီးလားရေခါ သူမ အိ ၀တ်ရုံတော် လီတိုက်လို့ လွင့်ကျပါလား ရေ။ ယင်းသို့ ဖြစ်ခါ သူမ အိ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြား က စူးရှထွန်းလင်းသော အလင်းရောင်တန်းကြီး တစ်ခု တက်ပါလတ်တေ။ ယင်း အလင်းရောင်တန်းကို ကန်ဒေဒီး အိ အစောင့်အရှောက်၊ သူမလင် အိ အပါးတော်မြဲလုလင်ပျို က မြင်လားရေ။ ယင်းလုလင်ပျို နာမေက ကန်အန်ရော့ Ken Angrok ဖြစ်ပြီးကေ သူ့ သခင်ပညာဟိ တစ်ပါးပြောရေ စကားကို လားပြီး သတိရရေ။ ယင်းပညာဟိ စကားက၊ ထွန်းလင်းတောက်ပသော လျှို့ ဝှက် အင်ဂါ ကို မြင်ရသော လုလင်သီဝ် ဖိုမနှစ်ပါး အိ မျှခြေတန်ဖိုး ကို တွိရသောသူ ဖြစ်သဖြင့် ဧကန်မုချ ဘုရင်ဖြစ်လတ်တံ။ ယင်းပညာဟိအိ စကားကို အမှူးထားလို့ ကန်အန်ရော့ လုလင်ပျိုသီဝ် မြိုးစားကို သတ်၊ ကန်ဒေဒီး ကို သိမ်းပိုက်ကာ မင်းပြုလေ သတီးဝ်။ သို့ ပါသော်ငြား ကန်ဒေဒီး သီဝ် နဂိုကပင် မြို့ စားမင်း နန့် ကိုယ်ဝန်ရပြီး ဖြစ်ရကား အနုသျှပါတိ Anushapati ဟူသော သားကို မွီးဖွားလေအိ။ ကန်ဒေဒီး သီဝ် သူမအိ သားကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် နှင့် တကွ ပြောပြလေ၍ လက်စားချေတတ်သော အနုသျှပါတိ သီဝ် ကန်အန်ရော့ကို သတ်ကာ မင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ပြန်အိ။ အနုသျှပါတိ သီဝ် လည်း တဖန် အသတ်ခံရ ပြန်တုံ၍ သူအိ သားတစ်ယောက် မင်းအဖြစ်ကို ရပြန်အိ။ ဤသို့ ဖြင့် ကန်ဒေဒီး က ဆင်းသက်သော မင်းစိုင်သီဝ် မါဂျာပါဟိ Majapahit ဟူသော မင်းနိုင်ငံကို ၁၃၊ ၁၄ ရာစု နှစ်တွင် တည်ထောင် မင်းပြု စိုးစံလေသတီးဝ်။ သို့ ဖြစ်၌ ပရာဂျနပါရမိတ Prajnaparamita ဟူသော 14 ရာစုက ရုပ်ထုသီဝ် ဂျာဗားကျွန်းသားတိ ယုံကြည်ကတ်လေသော 'မီးရဲရဲတောက်သားအိမ်ရှင် မင်းသမီး' ဟု နာမတွင်သော ကန်ဒေဒီး အိ ရုပ်ပွားဖြစ်ကြောင်း ထင်မှတ်ရလေအိ။
Andaya, Barbara Watson. (2008). The Flaming Womb; Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii.